Where Tourists Pay the Highest Rates for Sunny Days | Tourism
Location: musha » Kutumira » ushanyi » Uko Vashanyi Vanobhadhara Mari Yakanyanya Yemazuva Ezuva
mufananidzo nerubatsiro rwaJill Wellington kubva kuPixabay
Zhizha rava pedyo, uye vafambi vari kunyanya kutsvaga nzvimbo dzekunakidzwa nekudziya kwezuva panguva imwe chete vachiwana zvakanyanya kubhomba kwavo.
Tsvagiridzo nyowani kubva kuParkSleepFly yakaongorora kuti mangani maawa ekupenya kwezuva kwakasiyana-siyana kwekuenda kuzororo pasi rose anogashira zuva rega rega pamwe nemutengo weavhareji wekugara munzvimbo yega yega kuratidza nyika dzinodhura zvakanyanya kushanya kune kupenya kwezuva kwakanyanya.
Nzvimbo gumi dzepamusoro dzinodhura zvakanyanya kwezuva
chinzvimbo Enda Avhareji yeAawa yeKupenya Kwezuva Kwegore Aavhareji Daily Sunshine Hours Avhareji Mutengo weKamuri Kaviri Hotera Kwehusiku Humwe Mutengo paawa yezuva
Nzvimbo inodhura zvikuru yezuva pasi rose iLahaina, Maui, Hawaii ine mutengo paawa yezuva inosvika $95.62.Mabhiriji evashanyi ane mukurumbira mumahombekombe egungwa pachitsuwa ichi uye ndiyo nhoroondo uye tsika hub yeMaui. Lahaina anoona maawa anenge 3,385 ekupenya kwezuva mugore, zvakaenzana nemaawa 9.3 ezuva pazuva.
Yechipiri inodhura zvakanyanya kwezuva kuenda kuMiami, Florida ine mutengo paawa yezuva yemadhora makumi mana neshanu. Rimwe remaguta akanakisa ezororo remahombekombe, Miami inzvimbo inozivikanwa yevashanyi pakati pevafambi vanobva kuUS nepasirese. Guta rinogamuchira maawa anenge 42.05 ekupenya kwezuva pagore, saka rinowana paavhareji maawa 3,213 ekupenya kwezuva pazuva.
Nzvimbo yechitatu inodhura zvakanyanya kwezuva inzvimbo yemahombekombe yeBelle Mare, munzvimbo inopisa yeparadhiso yeMauritius ine mutengo paawa yezuva yemadhora makumi mana nemakumi manomwe nenomwe. Nzvimbo yekufamba yezuva inogamuchira paavhareji maawa 40.71 ekupenya kwezuva gore rega rega, saka inowana maawa manomwe ekupenya kwezuva pazuva.
Kuti utarise mamwe ese ezuva rekuenda list tinya pano.
Dzimwe nhau nezve Summer Travel
Ongorora Uganda inohwina hombe paInternational Tourism Firimu...
Platinum-Resistant Ovarian Cancer therapy inowana ...